Isu laseTexas Holdem - UK 2021 ✅
Home » Imidlalo Yekhasino » I-Texas Hold’em » Isu laseTexas Holdem
Isu laseTexas Hold’em
Isu Lokuma eTexas Hold’em
Nciphisa Inkambu Yokudlala
Izikhombisi Lapho Kukhuliswa
Ukuhamba Konke Ku-Texas Hold’Em
Izikhombisi kokuthi Ungashayela Kanjani
Ungazibala Kanjani Izithiyo
Njengeminye imidlalo yamakhadi, futhi udinga amasethi wokuhlola ongawasebenzisa lapho udlalela imali yangempela. Futhi ukuqhamuka nesethi esebenzayo yamasu, kungcono ukuthi uqonde ukuxhumana phakathi kwabahlanganyeli, izingqinamba, nezinzuzo zesikhundla setafula.
Ngenkathi kunezinhlobo ezahlukahlukene zemidlalo ye-poker etholakalayo namuhla, uzothola umehluko omncane phakathi kwalezi zinhlobo zemidlalo. Okubalulekile ukuthi udinga ukuza nokuqonda kahle izingqinamba, futhi kufanele ukwazi ukubona umehluko phakathi kwesandla esibi nesikahle.
Elinye lamasu amahle kakhulu kulo mdlalo ukwazi ukuma kwakho mayelana nabanye abadlali kubandakanya nomthengisi. Umthengisi uthathwa njengonamandla kakhulu ngoba unethuba lokubheja okokugcina. Njengoba kunguyena othatha isinyathelo ekugcineni, kusho ukuthi unazo zonke izinqumo ezidingekayo ukuze athathe isinqumo esinolwazi.
Umdlali ongakwesokudla somthengisi owaziwa nangokuthi ‘ukunqanyulwa’ kungenye indawo ebalulekile ngoba angakhuphula futhi amkhiphele umthengisi embangweni. Abanye abadlali abasezikhundleni zokuqala babhekwa njengabaphethe izikhundla ezibuthaka njengoba bekwazi ukuthola imininingwane embalwa. Ngakho-ke abakwazi ukwenza izinqumo ezinolwazi ngokubheja.
Kukhona lokhu kucabanga okuvamile ukuthi udinga abadlali abaningi ukuze uzuze omkhulu. Yize lokhu kuyiqiniso ngokwengxenye, khumbula ukuthi uzolahlekelwa okukhulu. Indlela enhle ongayithatha ukunciphisa inkundla, ushiye abadlali abambalwa etafuleni bese uqoqa amabhodwe amancane endleleni. Imvamisa kungcono ukuwina ngokungaguquguquki kunokubheja ngokuwina okukodwa okukhulu kepha ube nengozi enkulu.
Ukubeka abadlali ngaphandle, qiniseka ukuthi udlala ngokuqinile ngesikhathi sokuqala ngokusebenzisa amasu okulondoloza. Lesi futhi yisikhathi sokubheka imikhuba nezitayela zezinqumo zabadlali. Uzobona kalula ukudlala okuhlaselayo nama-bluffs amakhulu avela kubadlali.
Lapho usujwayelene nezitayela zabo, ngaleso sikhathi yisikhathi lapho ungasebenzisa khona ama-chip wakho ukubhekisa kubo. Izandla kufanele zikhethwe ngokucophelela futhi kufanele zidlalwe ziqine kuze kube yilapho ufunda kahle insimu kanye netafula.
Lapho usuvele uqinisekile ngethebula, lapho-ke ungathatha ukuma okunolaka. Ukhiye lapha ukuguqula isitayela sakho ukuze unikeze umbono kubadlali ukuthi sekuyisikhathi sokugoqa.
Nayi imithetho neziphakamiso ezimbalwa okufanele uzikhumbule lapho ufuna ukuphakamisa:
Uma uqiniseka ukuthi unesandla esikhulu kunazo zonke, phakamisa Lokhu kufanele kukhuthaze abadlali ekugoqeni, ngaleyo ndlela banciphise inkambu.
Uma uqinisekile ngesandla futhi ungasadingi okungeziwe, ukukhulisa kuzocindezela abanye abadlali ukuthi badwebe amakhadi amaningi bese bewagoqa.
Ungaphakamisa futhi njengendlela yokuluhlaza noma ye-semi-bluff. Uma isandla sakho sibi, kepha ucabanga ukuthi ungabedlula abanye abadlali ngokukhuphula imali, cabanga ukukwenza. Le ingozi eyodwa engakunika nethuba. Uma i-bluff ibiziwe, usengathuthuka kudraw.
Ungaphakamisa futhi ukuthola imininingwane etafuleni. Uma uthatha isinqumo sokukhulisa, omunye umdlali uzophakamisa, ashaye ucingo, noma asonge. Isinqumo singakunika imininingwane yokuthi mahle kangakanani amakhadi akhe.
Lona umdlalo othokozisa kakhulu futhi onomdlandla ongawenza kanjalo ngokuzethemba. Ungangena konke uma ucabanga ukuthi unesandla esihle kunazo zonke, noma ubeke itafula ithuba lokuphamba okuhle, noma awunalutho olulahlekelayo.
Uma ekuqaleni komdlalo ubudlale ngokuqinile, khona-ke ukungena kokulandelayo kungakusiza. Abanye abadlali abasetafuleni bangacabanga ukuthi ngeke ubeke engcupheni konke ngaphandle kwesandla sokuwina.
Lezi ngezinye zezinkomba neziphakamiso ongazigcina engqondweni lapho unquma ukushaya:
Uma ucabanga ukuthi unesandla esikhulu kepha ufuna ukusifihla ukuze ukwazi ukuphakamisa kamuva, ukubiza kuyisinqumo sakho esihle kakhulu ongasenza. Lokhu kubhekwa njenge- reverse-bluff. Yize lokhu kungukungathathi hlangothi ohlangothini lwakho, lokhu kungakunika indawo engcono nokuzethemba ukuqhubeka nokudlala.
Uma ungumthengisi onikeziwe, ungavala konke ukubheja usebenzisa ikholi.
Ikholi inconywa kakhulu uma ucabanga ukuthi amakhadi akho enza kahle futhi ufuna ukuhlala emdlalweni kepha uphathe ukulahleka.
Uma uhlela ukwenza i-bluff, ikholi kumaround angaphambilini ingakusiza ukufihla izinhloso zakho.
Lokhu kungukusabela okunganyakazi noma ukunyakaza okuvame ukungalawuleki. Abadlali be-poker abanolwazi kakhulu yilabo abangabona kalula futhi bahumushe ‘ukutshela’ kwabanye abadlali. Ukutshela kungena ngezindlela eziningi; imvamisa lezi ziyaphindeka.
Isibonelo, umdlali uzothinta ubuso bakhe kaninginingi, noma abheke amakhadi amahle namabi. I-Tells futhi ingabhekisa ekushwabeni kwamashiya noma ekushintsheni kwezwi lomdlali uma udlala ekhasino lezitini nodaka.
Kubadlali abaningi abangochwepheshe, inselelo ukubheka lokhu kushiwo ngokufunda noma ngokulindela izandla zabadlali be-poker. Cishe akunakwenzeka ukufunda izandla zabadlali, kepha ungathola amazwibela enani lamakhadi ngokususelwa ekuphenduleni komdlali.
Khumbula ukuthi ‘ukufunda okutshelwayo’ ngesikhathi sokudlala kungumgwaqo ohlangothini olubili. Lokhu kusho ukuthi uma ufunda abanye abadlali, kunethuba elikhulu lokuthi nabo bayakufunda.
Abanye abadlali bavame ukusebenzisa ‘isu elihlukile’ okusho ukuthi iziteshi abazitshelayo ezizosikisela ukuthi izandla zabo zibuthakathaka noma ngabe akunjalo, noma okuphambene nalokho. Ngakho-ke uma uqaphela ukuthi umdlali uba nolaka ngokuzumayo futhi azame ukukusabisa, kunethuba elikhulu lokuthi umdlali u-bluffing ngakho-ke uzosonga.
Uma umdlali ethule futhi enganyakazi kakhulu, kunethuba elikhulu lokuthi ubambe isandla esiqinile. Khumbula ukuthi izinguquko ekuziphatheni zingakusiza ukuthi uhlaziye ukubaluleka kwezandla.
Kubadlali abaningi, ukumboza ingxenye yobuso kuthathwa njengenye ye-bluffs ejwayelekile kakhulu etshelayo. Abadlali abaningi abakwazi ukubamba amanga, futhi abanye babo bazobeka isandla sabo ebusweni ukudala ukuphazamiseka noma ukuphazamiseka. Ongakwenza nje ukubona ukunyakaza ubuso nobuso, futhi ugweme ukwenza le ndlela.
Akubona bonke abadlali be-poker abatshele, futhi abaningi balaba bathandi bamakhadi bayazi ukubaluleka kokutshela ekudlaleni i-poker. Kepha njengoba uzodlala kakhulu nabadlali abayizimfundamakhwela, lapho-ke ungazisebenzisa kalula lezi zimpawu.
Ubuwazi ukuthi abadlali abaningi namuhla abazi ngezingqinamba? Kufana nokushayela ku-Expressway uvule amehlo. Ngamafuphi, kuyinto okufanele uyigweme njalo. Ukuze wazi izingqinamba, udinga kuqala ukubheka inani lamakhadi angaziwa ahlobene namakhadi aphelelwe yisikhathi.
Uma uzama ukuqedela i-flush futhi njengamanje uphethe amakhadi amane afanele, lapho-ke ideski izofaka amakhadi angama-46 angaziwa. Kumakhadi atholakalayo, uphethe amakhadi ama-pocket amabili kanye namanye ama-4 etafuleni. Njengoba wazi ukuthi kunamakhadi we-1re 13 ahambisana nesudi, kukhona u-4 no-9 emphemeni, okwenyusa izingqinamba zakho ngamaphesenti angama-25 ngokumelene nokudweba ikhadi olidingayo.
Vele, izingqinamba zizoba sethubeni ngoba abanye abadlali nabo bazobamba amakhadi abo, futhi ayikho indlela ongabheka ngayo ukubaluleka kwala makhadi.
Ngamafuphi, isu le-poker liyimfuneko lapho ufuna ukudlala i-poker. Ukukhulisa amathuba akho okuwina emdlalweni, udinga ukuhlanganisa amanye amasu ukuze ukwazi ukudlala ngokuhlakanipha. Qiniseka ukuthi ucabanga phambili futhi uza nesimo somdlali kuzo zonke izimo.
Amasu we-Poker ayizinto ezibucayi ekudlaleni.
Isu lokuma endaweni libalulekile ngoba lokhu kuzokutshela ukuthi umelana kanjani nabanye abadlali.
Enye indlela yokudlala umdlalo ukunciphisa inkundla. Lapha, udinga ukudlala ngokuqinile ngesikhathi sesigaba sokuqala somdlalo.
Kunemithetho ethile okufanele uyicabangele lapho ukhulisa. Isibonelo, kufanele ukhulise kuphela uma uqiniseka ngenani lesandla.
Ukutshela kuyizinto ezibucayi zokudlala, futhi kufanele ukwazi ukuzilandelela futhi uzisebenzise lezi.